‘विश्वभरका नेपाली युवालाई मातृभूमिसँग जोड्ने मेरो उद्देश्य’
युवा शक्ति मुलुकको भविष्य हो । तर यो भविष्य आज विदेशमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेको छ । पहिलो र दोश्रो बेञ्चका विद्यार्थीहरु युरोप, अष्ट्रलिया र अमेरिकामा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन भने तेश्रो बेञ्चका विधार्थी अर्थात युवाहरु कोही अरवको ५० डिग्रीमा आफ्नो पसिना चुहाइरहेका छन त कोही यो मुलुकलाई नेतृत्व दिन्छु भन्दै राजनीतिमा लागिरहेका छन । यद्यपी नेपालमा रहेका र राजनीतिमा लागेका सबै तेश्रो बेञ्चमात्रै छन भन्ने पनि होइन । पछिल्लो पटक विश्वका उत्कृष्ठ विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ठ परिणाम हाँसिल गरेका युवाहरु पनि मुलुकभित्र आफ्नो भविष्य खोज्दै फर्किरहेका छन । यसरी फर्किने युवाहरुमा नेपाल भित्रै उद्यम र व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पनि फर्किएका छन । आज विश्वभरी छरिएर रहेका युवाहरु जो बिरानो मुलुकमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन । उनीहरुलाई आफूले सिकेको सीप, प्राप्त गरेको ज्ञान र उपलब्ध अनुभवलाई सके पुरै मातृभुमिका लागि नभए कुनै न कुनै रुपमा मातृभुमीसंगै जोडिराख्नुपर्ने चुनौती मुलुककासामु छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई मातृभुमिसंग एकाकार गर्ने भूमिका सरकारले पुरा गर्न नसकेको भएपनि विदेशमा रहेका नेपालीहरु गैरआवसीय नेपाली संघको माध्यमबाट थोरबहुत निर्वाह गरिरहेका छन । त्यसमा पनि विश्वभर छरिएर रहेका युवाहरुलाई मातृभुमिसंग सोझै एकाकार गर्ने भूमिका एनआरएनए भित्र पनि युवा कमिटिले गर्ने गर्दछ । र यहि भुमिका निर्बाह गर्नका लागि अष्ट्रेलियामा व्यवसायमा संलग्न युवा स्वतन्त्रप्रताप शाह अघि सरेका छन । यस अघि एनआरएनए अष्ट्रलियाको उपाध्यक्षको सफल भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेका र यतिबेला युवा किमटी संयोजकमा उम्मेदवारी दिएका शाहसँग आजकोन्युजले गरेको कुराकानीः
एनआरएनएको युवा संयोजकमा तपाईको उम्मेदवारी किन ?
–एनआरएनमा युवा संयोजकका लागि उमेर र अनुभव दुबै चाहिन्छ । त्यो दुबै विषय म मा छ अर्थात म उमेरका हिसाबले पनि योग्य छु र एनआरएनमा पनि मेरो अनुभव छ । मैले अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पनि लामो समय रहेर काम गरिसकेको छु र अब अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मै रहेर काम गर्ने इच्छा भएकाले मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
विश्वभर रहेका नेपाली युवाहरुलाई जोड्ने के योजना छ ?
–देशभन्दा बाहिर जति पनि युवा छन उनीहरुसँग एउटा सीप छ, ज्ञान छ, अनुभव छ, त्यसलाई कसरी नेपालमै रहेका युवाहरुसम्म पु¥याउन सकिन्छ र दुई ठाउँमा रहेका नेपाली युवाहरुलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने मेरो मुख्य उद्देश्य हो । अर्को कुरा दैनिक हजारौँ युवाहरु विदेशी रहेका छन । कतिपय दक्ष छन कतिपय अदक्ष पनि तर उनीहरु दैनिक हजारौँको संख्यामा बाहिरिरहेका छन । यसरी देशको मेरुदण्ड पलायन भैरहेको छ । उनीहरुलाई देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गराउन एनआरएनले केही गर्न सक्छ । जस्तो त्यही युवा नेपालमा एउटा रेष्टुुरेन्टमा काम गर्न अफ्ठेरो मान्छ तर उ युरोप, अमेरिका गएपछि सुरुमा त्यही रेष्टुरेन्टमा काम गर्न पुग्छ । यहाँ नेपालमा कामप्रतिको दृष्टिकोणलाई समान बनाउन आश्यक छ त्यसका लागि म विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन चाहन्छु । यहाँका युवाहरुलाई कामप्रति उत्प्रेरित गरेर विदेश जान खर्च गरिने पैसाले नेपालमै राम्रो आम्दानी हुनेगरी काम गर्न सकिने कुरा कन्भिन्स गर्न लाग्छु । देशबाहिर रहेका युवाहरुको सीप नेपालमा ल्याउन पलह गर्छु ।
युवाहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चित गर्न र उनीरुको भूमिका नेपालमै बढाउन तपईको योजना के त ?
–हामीले देशभित्र र बाहिर रहेका युवाहरुको बृहत संयुक्त सम्मलेन गर्ने । त्यसपछि एक अर्काको अनुभव, आइडिया सेयरको अवस्था सिर्जना गर्ने । अवसरको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि नेपाली युवा बाहिर जानै पर्छ भन्ने छैन । हामीले पहिचान गर्न नसकेको मात्रै हो । हामीसँग रहेका पर्याप्त कृषियोग्य जमिनहरु बाँझा छन । दशैँमा मात्रै हामीले करोडौँको मासु आयात गयौँ । नेपालमा यतिधेरै अवसर छन कि युवारुले विदेशमा गएर कमाउने भन्दा धेरै पैसा यही कमाउन सक्छ र त्यहाँको भन्दा बेटर लाइफ यहीँ जिउन सक्छ । देशका लागि एउटैमात्र जरुरत के छ भने हामीेले युवाहरुलाई यस्तोखाले सूचना दिनुपर्यो, आइडिया सेयर गर्नुपर्यो र कुनै पनि काम सानो ठूलो हुँदैन भनेर कन्भिन्स गर्नुपर्यो ।
विकास र समृद्धिका लागि नेपालमा अभियान सुरु भएका बेलामा विदेशमा रहेका युवाहरुलाई नेपाल जाऔँ भनेर तपाईहरु कसरी सन्देश दिन सक्नुुहुन्छ ?
–सबैभन्दा पहिला त्यहाँ गएका युवाको पनि वर्ग छ । जस्तो युवाहरु अष्ट्रेलिया जान्छन, अमेरिका जान्छन, युरोप जान्छन, मध्यपूर्व जान्छन । मध्यपूर्वमा गएका युवाहरु त केही समयपछि फर्किहाल्नुहुन्छ । तर मैले यही राम्रो अवसर देखिरहेको छु । नेपाली युवाहरु जो मध्यपूर्वमा जानुहुन्छ उहाँहरु दक्ष भएर फर्किनुहुन्छ, मतलब उहाँहरुको हालतमा सीप हुन्छ । त्यस्ता युवाहरुका लागि हामीले उहाँहरुलाई अवसरको सिर्जना गरिदिनुपर्छ । विदेशमा रहेकाहरुलाई नेपालमा गएर काम गर्दा यस्ता अवसर दिनसक्छौँ भनेर रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गरिदिनुपर्यो । जस्तो उदाहरणका लागि अष्ट्रेलियमा रहनुभएका हाम्रा खेमराजजी अस्ती यहाँआएर एयरपोर्ट क्लिनिङको काम गर्नुभयो । उहाँ अष्ट्रेलियमा सुटटाई लगाएर त्यही काम गर्नुुहुन्छ । यहाँ उहाँले काम भनेको काम हो त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिनुभयो । हामीले विभिन्न देशमा वसेर यस्तो काम गर्नुपर्छ । जुन कामलाई नेपालमा पनि सामान्य हो भन्ने बनाउनुपर्छ ।
–मैले पहिल्यैदेखि काम गरिरहेको छु । अष्ट्रलियामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को उपाध्यक्ष भएर ६ वर्ष काम गरेँ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पनि अष्ट्रेलिया एक नम्बरमा पर्छ त्यसमा मैले राम्रोसँग काम गरेको छु । जुन कुरा धेरैलाई थाहा पनि छ । मलाई विश्वास छ यसपटक उहाँहरुले मलाई अमूल्य मत दिनुहुन्छ ।
एनआरएन सम्मेलनका प्रतिनिधिहरुलाई तपाईको सन्देश के ?
–मत दिनु भन्दा अघि हाम्रो पार्टी नभन्नुस, राम्रो व्यक्ति छान्नुहोस र स्वविवेकको प्रयोग गर्नुहोस भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।